Otú nyefee Video si iPad ka Computer
> Resource> iPad> Otu Easy Ngwọta ka Nyefee Video si iPad ka Computer
E wezụga na-ebufe vidiyo si na PC na-iPad maka play ke laa, mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike mkpa nyefee vidiyo si na iPad ka PC, ma n'ihi na ndabere ma ọ bụ edezi na ọrụ software, dị ka iMovie. Otú ọ dị, iTunes nanị na-ahapụ anyị nyefee vidiyo si na PC na-iPad, ọ bụghị site iPad ka PC. Na nke a, nyefee video si iPad na kọmputa, anyị kwesịrị ịgakwuru ndị ọzọ ngwa. Ebe a ga-amasị m ike ikwu na ị Wondershare TunesGo Ochie (Windows). Ọ na-enye gị ka ị na idetuo video si iPad na kọmputa mfe na hassle kpam kpam.
Mgbe download na wụnye Wondershare TunesGo Ochie na PC gị na, ị kwesịrị ị na-eso nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú nyefee vidiyo si na iPad ka PC. Ọ bụrụ na ị nwere Mac kọmputa, biko gbalịa Wondershare TunesGo Ochie (Mac) ka nyefee vidiyo si na iPad ka Mac.
Mfe nzọụkwụ ịkwaga video si iPad na kọmputa
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na TunesGo Ochie
Ná mmalite, wụnye ihe omume na kọmputa gị na-agba ya. Jikọọ gị iPhone na ya site na eriri USB. TunesGo Ochie ga chọpụta gị iPad ozugbo ọ ejikọrọ. Tupu na-ala-ebufe vidiyo si na iPad na kọmputa na Wondershare TunesGo Ochie, ị kwesịrị ị na-ahụ na ị na arụnyere iTunes. TunesGo Ochie na-arụ ọrụ mgbe iTunes arụnyere.
Nzọụkwụ 2. Nyefee video si iPad na kọmputa
Mgbe ahụ, pịa "Media" ke ekpe ebi ndụ. Na media window, pịa "Movie" iji bugote fim management window. Họrọ gị chọrọ videos na pịa "Export ka". Na ndọpụta ndepụta, họrọ "Mbupụ na My Computer". Na, na, a faịlụ nchọgharị window ga-gbapụta. Ị nwere ike họrọ ọ bụla na nchekwa ịzọpụta ndị a videos.
Cheta na: TunesGo Ochie bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ọtụtụ iPad, gụnyere iPad Obere, iPad na Retina ngosi na iPad 2.
The video transfer ga na-ewe gị otu ma ọ bụ abụọ munites. Mgbe ahụ, video ga-depụtaghachiri ka kọmputa ọma. Mgbe ahụ, Ị nwere ike mgbe mkpa ka nchegbu banyere ihichapụ video na gị iPad na-atụghị anya na-enwe ha gị obi ọdịnaya.
Olee otú Naghachi Data si Broken / Nwụrụ Anwụ iPad